About us - Xingtai Tianzheng ukutywina Co., Ltd.
Xingtai Tianzheng ukutywina Co., Ltd.
Xingtai Tianzheng ukutywina Co., Ltd.kuyinto umenzi ngobuchule iimveliso extrusion zerabha owasekwa ngo-2010, kwaye ibekwe Xingtai isixeko, kwiPhondo Hebei China, kufutshane Capital Beijing nezibuko Tianjin. Sine-R & D enamandla kakhulu kunye nephambili, ukuthengisa kunye namaqela emveliso, ngaphezulu kwe-100 labasebenzi. Inkampani yethu inobuchwepheshe obukhethekileyo kunye nezixhobo eziphucukileyo. Izinto ezahlukeneyo zinokuveliswa kubandakanya i-EPDM, iPV, iVITON, iNBR, iSILICON kunye nemicu yesiponji. Ngale ndlela, sinako ukuvelisa iingcango zomnyango, iziqwenga zefestile, imitya yekhabinethi, imitya yoomatshini .Iimveliso eziphambili zisetyenziswa kakhulu ezimotweni nasekwakhiweni kwemizi-mveliso. Iimveliso ziyathengiswa ezishushu kwihlabathi liphela.
I-Xingtai Tianzheng seal Co., Ltd.yishishini elibanzi elivelisa iintlobo ezahlukeneyo zezithuthi ezinje ngeemoto, izithuthuthu, iijenreyitha, amasimi eoyile, iinqanawa, oomatshini bobunjineli, njl.njl. Iimveliso eziphambili zezi: zonke iintlobo zokutywina iziqwenga, isilinda gasket I-gasket yombhobho wokukhupha, itywina leoyile, itywina levalve, itywina lamanzi, ipakethe yokulungisa, ukupakisha okuncinci, ukuhamba ngesithuthuthu, imoto, ikhonteyina, ulwakhiwo kunye nokuhombisa izinto zokutywina, icebo lokucoca, ucingo lwamandla aphezulu, njl. Imveliso yetekhnoloji yemveliso, yazisa ngetekhnoloji ephezulu yokuvavanya izixhobo, kunye nokuseka iseti yenkqubo yophuhliso lomngundo wemveliso entsha. Ngokwemfuno zabathengi nangaliphi na ixesha, sinokuvelisa iimveliso ezanelisa abathengi ngexesha elifutshane. Iimveliso ezivela kuphuhliso kunye nemveliso ukuya kwintengiso, kukho iseti epheleleyo yenkqubo yolawulo, ephucula umgangatho weemveliso. Ngenxa yemveliso eyahlukeneyo, umgangatho, ixabiso elifanelekileyo, inkonzo endaweni, ukuphumelela ukuthembela kwabathengi, iimveliso zithunyelwa kuMazantsi mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, eAfrika, eMzantsi Melika nakwamanye amazwe nakwimimandla emininzi. Umgangatho sisiseko sokusinda kweshishini, igama sisiseko sophuhliso lweshishini, kwaye inkonzo ngumthombo wenkqubela phambili yeshishini. Xingtai Tianzheng itywina Co., Ltd. ukulungele ukusebenza nabantu abanengqiqo ehlabathini lonke ukwenza ikamva elingcono.
Iimveliso zethu zithengiswa kuMzantsi-mpuma weAsia, kuMbindi Mpuma, eAfrika, eMzantsi Melika nakwamanye amazwe nakwimimandla ngenxa yoluhlu lwethu olupheleleyo lweemveliso, umgangatho onokuthenjwa, ixabiso elifanelekileyo kunye nenkonzo elungileyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi, abasebenzi bethu baya kuqhagamshelana nawe ngexesha lokuqala.